Diri-dhaba: Guryo Soomaalidu Leedahay Oo La Gubay + Xaaladda Oo Cakiran
Sunday August 05, 2018 - 19:58:41 in Wararka by Super Admin
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Diri-dhabe ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay haatan cakiran tahay, kaddib markii dhowr guri oo ay deganaayeen dad Soomaali ah dab la qabadsiiyay.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dad ku sugnaa guryahooda dab la qabadsiiyay halkaasina ay ku geeriyoodeen.
Gawaadhida dab damiska iyo kooxaha gurmadka degdega oo gaaray xaafadaha dabka la qabadsiiyay ayaa ku howlan daminta dabkaasi.
Booliiska Federaalka Itoobiya oo kol sii horeysay gaadhay magaalada Diri-dhabe ayaa la soo sheegay inay la tacaalayaan waxka qabashada xaalada faraha kasii baxeyso balse ay ku adkaatay.
Dadka deegaanka ayaa qaba cabsi xooggan waxa ayna farta wadnaha kag hayaan sida ay ku dambayn doonto xaaladdu.